Sei Debian naUbuntu vachienderera mberi zvakanyanya? | Linux Vakapindwa muropa
Kana isu tichitaura nezveDebian neUbuntu, zvinoita sekutaura dai taitaura nezvazvo mai nemwanasikana.
Debian, yekare distro yakazvarwa mu93 naIan Murdock, yakapa nyika sosi yemahara yekushandisa sisitimu nekusimbisa kugadzikana uye inoshanda APT package manejimendi.
Iyo distro iyo, sezvaungave uchiziva, inoitirwa kunyanya kumaseva, asi izvo zvinobatsira kune avo vanofarira kugona kumisikidza PC yavo padanho repakeji uye kuti nhasi ine zvakazara zvinyorwa uye tisingataure ruzivo, isu tiri kutaura nezve angangoita makore gumi nemashanu ekushanda paLinux.
Ubuntu, kune rimwe divi, akangozvarwa muna2004 uye pamwe ruzhinji rwakazviona musi iwoyo seimwezve kuchinjika kweDebian, yakaipa kana yakaipa uye mushure memakore gumi nerimwe zvaisafanira kuve yekutanga yakafanana vhezheni yekubuda.
Asi Ubuntu, distro yakanangisa pane yakatumidzwa zita «wekupedzisira mushandisi»(Vashandisi voga vasiri-vekupedzisira ndivo vanogadzira iyo distros), ndokuti, mune vanhu vasina ruzivo rukuru rwekushandisa makomputa yakatanga kugamuchirwa kukuru, ichifambiswa nemushandirapamwe wekushambadzira wakanaka (uyai, iyo cidís gratix) uye inogamuchirwa zvakanaka nevatsoropodzi.
Inofanira kutaurwa kuti Ubuntu haana kuzvarwa sechigadzirwa chekutengesa pakarepo, asi asi debian vanhu vachienda yepurojekiti. Ndivo vanotsvaga anozivikanwa manje Mark Shuttleworth kugadzira chigadzirwa chinobatsira (ndinofungidzira vaida kuwana raramo kubva pane izvi) uye vakatanga nemamirioni gumi emadhora Mamiriyoniire anopa mari LXA!?.
Zvakanaka, nekuda kwechikonzero ichocho, kuzvarwa kune vekare-veDebianite vanoshamwaridzana nemamirionea chaive chikonzero chakaringana kuburitsa godo pakati peveDebianites (vanoshandira mahara), asi handizvo chete.
Ubuntu sekuchinjika kweDebian zvinoenderana neizvi kuoneka. Muenzaniso weizvi ndewekuti vashanduri veUbuntu vanofanira kutora akawanda maDebian mapakeji kuti vaaise muUbuntu, ivo havaagadzire, kwete ese, ivo vanongo gadzirisa uye vozviisa.
Takatarisana nemafungire evanogadzira ubunter, maDebianite akaita: Parasites! Handizive kuti ndizvo here zvavakataura asi zvirinani kuti ndizvo zvavaifunga chokwadi. Vagadziri veUbuntu havana kubatana mukugadzira mapakeji avakazoshandisa uye akadonha zvakanyanya.
KuUbuntu raisave zano rakanaka seprojekti yekutsamwisa munhu anokupa chikafu, saka ivo vaona kuti kazhinji havana kubhadhara chimiro ichi nekubatana, ndiko kuti, ivo vakaziva kuti panguva yekusimudzira kwavo zvipembenene zveDebian uye hazvina kubatsira mukukura kwaDebian. Ini handizive kwandakawana uyu mutsara kana kuti kana zvaitika kwandiri, asi inoti:
Debian inobatsira Ubuntu uye Ubuntu inobatsira Ubuntu
Kukakavadzana kune chekuita neruzhinji kunosvika, kunyangwe Debian ichisvika kune veruzhinji vane ruzivo, vanhu vazhinji vepakati nepakati ruzivo vaenda kuUbuntu nekuda kwekuzivikanwa kwayo uye nekuti iri sarudzo yakanaka (inokodzera ine zvakawanda) . Vamwe vanoti Debian anosara kumashure, kuti hapana "maoko" ekuenderana nemhando yekuvandudza yaDebian, uye kuti Ubuntu, pamusoro pekusavabatsira, "vanoba" kubva kune vanoshandisa.
Asi ndosaka Canonical, iyo kambani inovandudza Ubuntu uye inochengetedza vese avo vanobhadharwa vanogadzira uye nharaunda yeUbuntu yakavhura hukama pamwe naDebian senge DCT (Debian Kubatana Chikwata) uye zvimwe zviitiko mune chaiwo mapakeji.
Ngatitaurei nhasi kutaura nezveUbuntu seDebian parasite haina kunaka, asi izvo yakabatsira kugadzira iyo nharaunda yakaipa uye mukurumbira wakaipa uyo sezviri pachena pakati pemushandisi weLinux epamberi. Ndiyo dzidziso yangu.
Zvinosuruvarisa kuti izvi zvakaitika uye kuti kuchine zvisaririra zvehasha uye neshanje. Isu takakuudzawo mazuva mashoma apfuura izvo paive nekukakavara pamusoro pezvimwe zvikonzero muDebian, saka chimwe chinhu chakaipa chiri kuitika mukuparadzirwa kukuru kweLinux uye kuti, kupihwa izvo zvandakuudza zvakanyanyoenderana nehunteros iyo, ini ndinofunga, inofanirwa kuve iri rakawanda re linux mass. Amai vedu havasi kuzofira kupa mwanasikana wedu nguva yakanaka.
Ian Murdock (baba vaDebian) akadaro kana Ubuntu ichikura, Debian anokura, asi chero bedzi Ubuntu iri kuonga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Sei Debian naUbuntu vachiwirirana zvakanyanya?
Uye ... Unowana gumi peso here?
Nahhh ... Zvimwe zvinhu kujekesa. Vanhu veDebian HAVASHANDI mahara, kuti ivo havana kambani kumashure kwavo hazvireve kuti havawani chimwe chinhu, nekuti icho SPI chiripo
Uye zvakare, ivo vanogamuchira mipiro. Chokwadi, havasi vese vagadziri veDebian vane muhoro, asi havasi vese vanogadzira Ubuntu.
Kudivi remakwikwi .. Hapana munhu anotaura nemisoro yavo ??? Ndinotsanangura. Makwikwi ekupusa iwayo (ndiregererei iro shoko) anoitwa nevashandisi, kwete vavaki.
VAMWE vashandisi veDebian havadi Ubuntu senge iri kukura distro. Vachave nezvikonzero zvavo, zvisina basa kwandiri, asi ivo vanozozviwana.
Kuti uone izvi, haufanire kuongorora zvakanyanya kuti vanogadzira Ubuntu vakangoita sevanogadzira Debian. Uye ivo vari vaviri, uye hapana anoti chero chinhu kwavari, nekuti muchokwadi hakuna kukwikwidzana kunofadza.
Inhema huru pamusoro pemakwikwi aya. Makwikwi chimwewo chinhu, asi ini ndinofunga kuti kusvika parizvino Debian haaone Ubuntu semakwikwi uye haazoiti, iwo maviri ane zvibodzwa zvakasiyana
Ino inguva yekutanga kutaura pamusoro peblog, kunyangwe ndanga ndichivatevera kweinenge mwedzi.
Umm, ndakanga ndisati ndambofunga nezvazvo nokungwarira, asi kuti kune kukwikwidzana, chokwadi chandinotendawo chiri pakati pevashandisi chete, uye chete nezviuru zvevashandisi.
Kune ini chikamu changu, ndanga ndichishandisa GNU / Linux kweanoda kusvika gore rimwe, uye kunyangwe ndave kushandisa Debian (ndanga ndiripo kwemavhiki matatu), distro yangu yekutanga yaive Ubuntu, uyezve Arch.
Kune rimwe divi, zvakare iko kukwikwidzana kuripo kune chekuita nevashandisi veLinux vasingade vashandisi veWindows vanouya kuUbuntu, nezvimwe, nezvimwe (ndinofunga kuti iyi nyaya yakanga yatotaurwa nezvayo mune yapfuura posvo)
Makwikwi ekupusa iwayo (ndiregererei iro shoko) anoitwa nevashandisi, kwete vavaki.
Asi ini handina chandakagadzira, zvinoratidzika mune zvinyorwa zvandaivimba nazvo uye mune mamwe masosi pawebhu.
@manzha: Mutsva mhinduro, ndatenda nekumira
iyo yekuwana simba uye huremu mu linux world paunongosvika, zvichibva pahuwandu hwevanhu ... zvinoita kunge nhema kwandiri uye pamusoro pezvose zvinondiyeuchidza nezvechechi ... hazvizobatanidzwe muhunhu- linux (kwete gnu)?
PS: Ini handidi kuve Ubuntu kana Debian mushandisi kuti ndifunge seizvi. Ini ndaifanira kuidzima uye nekuisa imwe distro.
Pindura kune china
ZVAKADARO ZVINOFANIRA KUFUNGISISA, ASI DZIDZO YANGU YAKANDIKWANISIRA MUKUSHANDURA KWAKAOMA KUBVA GUIN2 KUSVIRA LINUX YAKABUDA UBUNTU, PANDAKANGOIZA DEBIAN ASI HAITADZE KUDZOKA KUBUNUNTU 8.04, ASI ZVINO KUTI NDINODA KUSIMBISA. NDAKANYANYA KANA UBUNTU UBUNTU ANODYA KUSVIRA DEBIAN KUTI WEMAFUNGWA ANOSIMBISA TINOVIMBA ZVINONYANYA KUFUNGA NEZVO NOKUTI BYLLI RICON NDOSAKA ANODZOKA NEPIRATE NEROPA RAKAIPA RIYA VAYA Vakamubatsira, NDINOVIMBIRA UNOFANIRA KUTI NDIKONZE NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONESA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONESA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONESA KUTI NDINOGONA KUTI NDINOGONESA IWE
Ini ndinoshandisa ubUnTU iN'T WINDOSE KIYI, ASI NDINE KUTANGA KWETE. NDINOKUSIYA Iwe Email yangu ndeye hulyfiruso @ blah… Maita basa kubva kuAnteMaNo
Isu takakuudzawo mazuva mashoma apfuura kuti pakanga paine kukakavara pamusoro pezvimwe zvikonzero muDebian, saka chimwe chinhu chakaipa chiri kuitika mukuparadzira kukuru kweLinux.
Izvo zvinondinetsa ini, kuti kune mhepo yakaipa, handizive kuti mhepo yakadai ichavei, ini handina kuiona, asi kana chiri chokwadi chiri kunetsa.
Izvi ndozvazvinofanira kuva, chinhu chinokwikwidza chipenzi. Ini ndinongovimba kuti avo vanokwikwidza ndivo vashoma. Kune yangu chikamu ini ndinoshandisa akati wandei distros (ini handisi nyanzvi asi ndinoishandisa) uye ini ndakanyoreswa mumaforamu (muchiSpanish) emamwe ma distros zvakare, kubatsira izvo zvandinogona uye kuziva.
Jekesa kuti mune yangu yapfuura chirevo chekutanga uye chechitatu ndima dzakatorwa kuti ndakazviisa asi hazviratidzike, zvakafanana nekuti ndakazviisa sekunge yaive html.
@ laura077 Makomendi anogamuchira HTML asi chete mamwe ma tag.
tatsveyamisa kana tatsveyamisa
Kwaziso uye mufaro gore idzva kune vese uye vese.
Ini handinzwisise kuti sei matambudziko aya achiwanzoitwa pakati pevanhu vanoita zvakafanana kana zvishoma. Ivo mahara sof mira kufongora. Nei uchinetsana nemumwe kana imwe distro iri nani kana kwete pane imwe kana kana ichikwereta iwe yakawanda. Zvakakomba rega kumhanya uchitenderera. Iko hakuna kushandisa kurwira pamusoro peaya mabhuru. Chinhu chakanakisa mune chero chiitiko ndechekuona kuti iwe unofarira kuishandisa zvakanyanya uye kana iwe uchikwanisa kuona maitiro ekugadzirisa. Asi kushandisa nguva kukanda tsvimbo pakati peimwe neicho nekuti zvinhu zvakasiyana zvinoita kunge dud kwandiri. Ndakaedza ese maviri ma distros uye ndinovada.
fsource, ndatenda, html haisi yangu sutu yakasimba, xD
Vashandisi nevasimudziri vari kunetsekana nekubudirira kweUbuntu kurwisa Debian havanzwisise pfungwa yemahara software.
Kana Ubuntu ikashandisa Debian mapakeji imhaka yekuti Debian inobvumira izvi kuti zviitike. Paunogadzira software yemahara, iwe unofanirwa kuziva kuti chero munhu anogona kutora basa rako oita mari uye kufarirwa naro, pasina kukupa chimwe chinhu mukudzoka kunze kwekutsikisa kodhi yekodhi.
Iwe haugone kugadzira 100% yemahara uye yemahara chigadzirwa uye unogunun'una kana mumwe munhu achichichinja uye achitora chidimbu.
Debian inogona kugadzikana, handipokana nazvo, asi, zvirinani kwandiri izvozvi, ndinoshanda zvakakwana mune vasingatyi pasina kuumbiridza chero chinhu neruoko kana kupedza maawa ndichigadzirisa chimwe chinhu chiri muUbuntu kuita 2 kudzvanya.
Chii chandiri chigutsa? Zvinogona, asi ndasvika pamhedziso yekuti ini handidi kugadzikana kunotyisa senge debian inopa. Iyo yakapihwa ne ubuntu inodarika kukwana makumi mapfumbamwe evashandisi.
Uye ngatitaurei pachena, nhasi, nehondo pakati peOS, iyo inofungidzira kuti vashandisi vanoda / vanoda kudzidza kubva kune yavo OS, yabuda.
Mushandisi anodzidza kana achida, hapana munhu ane mvumo yekuchikumbira, ndoda OS.
Saka, muchidimbu, rega munhu wese ashandise chero chaanoda, asi ngatirangarirei kuti hapana chinonditadzisa kutora Ubuntu distro, kuigadzirisa uye kuitengesa. Izvo zvinoshandawo kune debian.
Kana iri SL iri SL Uye seyekupedzisira tsamba ... avo vanosiya Ubuntu, vanoenda kuDebian. Kukuvara kwakawanda hakuite.
PS: esty, makorokoto
Ndiko here kuti amai vanofunga kuti mwanasikana ihure: P
chikonzero chacho chinofanira kutsvaga mune imwe yemanzwiro echinyakare emunhu… shanje…. Ubuntu mumakore mashoma akakwanisa kukohwa kubudirira kukuru mumunda wemahara mashandiro, budiriro iyo Debian yaisatombogona kuwana mukuvapo kwayo; Iko kubudirira kukuru, kunonzwika, mumwe weavo vanowana kunhuwa ... zvichemo zvekuti vatove kuda kutowira muchirwere chekunyanyisa kugadzirisa pane iyi nyaya. Panzvimbo pekutsamwa, vanamati veDebian vanofanirwa kuve nepfungwa zvinoenderana nezvavanogadzira, pfungwa isina rusarura, yakaipa vibes negodo uye kudzidza kugara pamwe chete mukuwirirana.
@nitsuga, uri ubuntero, mira kutsika-tsika.
@Nacho, kana nhata ichiuraya imbwa, nhata inofa ... unoreva chokwadi kuti mahara software uye ivo hapana chavari kuita chiri kunze kwemutemo, asi ivo vari kuparadza nharaunda, vanopa zvishoma uye hapana, havadzidzise vashandisi ...
Pindura ku delmak
Ini ndinoda openuse, inochinjika zvakanyanya kufarira kwangu
Mutambo weMonopoly unoenderana naBill Gates !!!!